Uchwepheshe we-Semalt On the Infection, Spyware kanye Malware Security Guide
I-Malware (i-term for the program violent) kuyinto isicelo sokuhloswe ukungena noma ukulimaza i-PC ngokungabikho kwemvume yakho. I-Malware ifaka izibungu, ukutheleleka kwe-PC, ama-stallions eTrojan, i-spyware, i-scareware futhi yilokho okuyisisekelo se-iceberg. Kungatholakala kumasayithi kanye nemilayezo noma kuhlanganiswe kumadokhumenti atholakalayo.
Indlela enhle yokugwema ukungcola ukuqhuba uhlelo oluphikisayo lokuthola uhlelo lokuvikela ukutheleleka, yenza imiphumela yesikhashana yezinhloli ze-spyware, ungabaleki ekuxhumaneni kokuxhumeka kwe-imeyili noma amasayithi. Yiba okusemandleni akho, abaculi baqaphele: manje i-malware ifihla ngokuhlakanipha njenge-imeyili evela kumngane noma isayithi eliwusizo. Ngempela, ngisho nabasebenzisi bewebhu abaqaphele kakhulu bazothola amagciwane ngokushesha noma kamuva.
Ngaphandle kwengozi oyenzayo, kunezinhlelo eziningi zokungena mahhala ezifinyeleleka ukuze kufinyeleleke kuzo. Igor Gamanenko, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , ubhala ambalwa ngaphansi.
Uphequlula, futhi konke okubukeka kwesikrini esibukeka ngokubonakalayo kubonakala futhi kukwazisa ukuthi kunenkinga ku-PC yakho, isibonelo, 'I-PC yakho ingase ingcoliswe ngezinhlelo zokusebenza ezilimazayo ze-spyware. Ukuxoshwa okusheshayo kuyadingeka. Ukuhlola, chofoza okuthi "Yebo". Angazi ukuthi kungokoqobo yini noma cha, kanjalo yiyiphi indlela oyamukelayo? Qaphela, lokhu kungase kube scareware.
Ihlola izikrini futhi iqoqa imininingwane ngawe, i-PC yakho kanye nokusebenzisa amandla akho ngaphandle kokuvuma kwakho-ikakhulukazi, ukugqugquzela izinhloso. Kungakwazi futhi ukuqoqa idatha kusuka kusikripthi sakho sekheli futhi ngisho namagama akho angukhiye.
Izinhlelo zokusebenza ze-Malware ezingakwazi ukuziphindaphinda futhi zenze ama-PC ahlukene.
Uhlelo lwe-ANTIVIRUS FREE
Izinhlelo ezihambisanayo zigijima njalo ngaphandle kokubona, zivikela i-PC yakho ekungcoleni.
Uhlelo lwe-unqulo wesi arab mahhala olulawulwa ngokumelene nohlelo lwe-spyware, oluhlukumeza i-rootkit kanye nokuzivikela okuqinile.
Ukulwa nesifo sohlelo lwe-Infection kusuka ku-Grisoft esivimba ngokweqile ama-PC kusuka ekutheleleni ngokunikeza ulwazi olululwazi lwe-infection olugciniwe nolwazi lokuphepha.
Ama-Essentialals e-Microsoft Security
Inikeza ukuphepha okuqhubekayo kwikhompyutha yakho evikela izifo, i-spyware, nezinhlelo zokusebenza ezihlukumezayo.
Yenza ingxenye ephephile ku-PC yakho ngewebhu ephephile kakhulu ngokusebenzisa lolu hlelo lokusebenza mahhala. Lena yinto engavamile yamakhasimende athuthukile.
Ukuqala, qinisekisa ukuthi usungula uhlelo olusha kakhulu oluvuselela uhlaka lwakho lokusebenza. Lezi zihlanganisa njalo izibuyekezo zokuphepha nokuqinisekisa ukusiza ukuqinisekisa igajethi yakho. Kuphikisiwe ngokusemthethweni? Lungisa.
I-SPYWARE YAMAHHALA / I-Eradication Apparatuses
Isicelo esilandelayo sihlola uhlaka lwakho lwe-malware, luphazamisa noma yikuphi ukungcola okungase kutholakale.
I-malware yokuqeda i-malware ebiza mahhala nayo ethatha i-rootkits, izimpethu, i-spyware, ama-parasites, kanye ne-adware.
Isofthiwe ehlonishwayo nephumelelayo ehlonipha futhi ixosha i-scareware ne-malware kusuka ku-PC yakho Source .